पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख १७ गते (सन् २०२१ अप्रिल ३० तारिख) शुक्रबार - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
घर धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख १७ गते (सन् २०२१ अप्रिल ३०...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७८ वैशाख १७ गते (सन् २०२१ अप्रिल ३० तारिख) शुक्रबार
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०५:३२
मेष – आयस्रोत बढ्ला । घरपरिवारको साथ मिल्नेछ । मान प्रसिद्धि बढ्लान् । उच्चाधिकारीको साथ मिल्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । धनको आगमन हुनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । हास विलासमा पनि रुचि बढ्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु र विलासको बस्तु बढ्लान् । विजय मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला ।
बृष – विजयश्री मिल्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । अन्न धन वृद्धि होला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । नयाँ आयस्रोत बढ्नुसँगै उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूल रहला साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । धनसित सम्बन्धित वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति महत्व ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
सिंह – सुख समृद्धि बढ्ला । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा सफलता प्राप्त होला । ऋण रोग र शत्रुप्रति विजय होला । स्वास्थ्यमा सुधार होला । लापर्वाही नगर्दा हितकर रहनेछ । अरुको भरमा नबस्नु बेस होला ।
कन्या – रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ काम पनि बन्नेछ । मान महत्व बढ्नेछ । जीवनसाथीकोे सहयोग मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्ला । सुखशान्ति ऐश्वर्य अभिवृद्धि हुनेछ । साझेदारीको कार्य बन्नेछ । आरोग्यता अभिवृद्धि हुनेछ । मीठो भजन पाउनुहुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । हासविलासमा रुचि बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ ।
धनु – भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु र विवादमा पर्ने उचित हुने छैन । आफ्नै बल विवेकले कार्य गर्नु बेस रहला । देखिएको समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ । शारीरिक र आर्थिक हित हुने काममा लाग्नु हितकर रहला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुनेछैन । हांसविलास खेलकुद भ्रमण आदिमा रुचि बढ्ला । जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्नेछ ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जित्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति बढ्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य बौद्धिक र रचनात्मक कार्य आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ । इष्टमित्रको सहयोग प्राप्त होला । ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
मीन – समय शुभ भाग्यवर्धक छ । प्रयासरत काममा सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । विकास होला । सुख-सुविधा बढ्नेछ । मन अनुकूलको काम बन्नेछ । मीठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । भोगविलासमा आकर्षण बढ्नेछ । ख्याति फैलिनेछ । सुखी र सफल रहनुहुनेछ । रोगबाट छुट्कारा पाउनुहुनेछ । यात्रा होला । सन्ततिसुख बढ्ला ।
अघिल्लो लेखमानेपाली कांग्रेसका ७ लाख ५० हजार क्रियाशिल सदस्यता नामावली वेवसाइटमा
अर्को लेखमासुनसरीमा आज राति १२ बजेदेखि एक हप्ता निषेधाज्ञा लागु हुने, मोरङमा पनि लगाउने तयारी